Dell ကထုတ်တဲ့ Windows 8.1 Venue tablets! | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Dell ကထုတ်တဲ့ Windows 8.1 Venue tablets!
သိပ်မကြားသေခင်က Microsoft ကသူရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Tablet Surface 2
ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ လို့အပြီး Dell ကသူရဲ့  Generation သစ်ဖြစ်တဲ့
Dell Venue 8 Pro နဲ့ Dell Venue 11 Pro ကို ယခုလိုထပ်မံပြီး ပွဲထုတ် မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယခုထွက်ရှိလာတဲ့ Dell Venue ကို Microsoft ကအဓိကယှဉ်ပြိုင်
ရတော့မှာပါ။ သို့ပေမယ့် ပါဝင်တဲ့ Features တွေကိုတော့ Microsoft ရဲ့ 
Surface တုန်းကလို သတင်းမှာတော့ Cnet ကအတိအကျဖော်ပြသွား
သိရှိရသလောက် အချက်အလက်တွေအရ Venue 8 Pro ကို မျက်နှာပြင် ၈ လက်မနဲ့ Venue 11 Pro ကို ၁၀.၁ လက်မ full HD IPS display နဲ့ပွဲထုတ် သွားပါတယ်။ အမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးအတွက် Windows 8.1 အသုံးပြုမယ့် tablet အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ အတွက် Laptop အဖြစ်ပါ အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် Hybrid အမျိုးအစားပါ။
အထူအပါး ၈.၉ မီလီမီတာ သာရှိမှာဖြစ်ပြီး fourth Generation Intel Core i3 နဲ့ i5 processors အသုံးပြုထားပါတယ်။ Mobile internat စနစ်ပါဝင်
ပြီး RAM 8 GB နှင့် Memory 256GB အထိသိုလှောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သိရှိရသလောက် စွမ်းဆောင်ရည်တွေအရ အမျိုးအစားနှစ်ခုလုံး
အတွက် Surface2နဲ့ Surface2Pro tablet လောက်မမှီနိုင်ဘူးလို့ဆိုပေ
မယ့် ထွက်ရှိပြီးခဲ့သမျှ tablet တွေထက်များစွာ သာလွန်နေတာက ရွေးချယ်
ပြီးတော့ Dell Venue 11 Pro ကိုဗြိတိန်ပေါင် £349 နဲ့ရောင်းချပေးမယ်လို့
ကြေငြာထားတဲ့ အတွက် Microsoft ထက်ဈေးကများစွာသက်သာ နေတာ
က လူအများစု ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ လာမယ့်
နိုဝင်ဘာလ-၇ ရက် စတင်ဖြန့်ချိပေးပါလိမ့်မယ်။
Microsoft ကကြေငြာလိုက်တဲ့ Surface2နဲ့ Surface2Pro tablet